ဖုန်းမှာဖျက်လိုက်မိသောVideos နဲ့ Mp4 တွေကိုပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Video Recovery 1.19_19 APK - Software Guide
Home / Andriod Recovery / ဖုန်းမှာဖျက်လိုက်မိသောVideos နဲ့ Mp4 တွေကိုပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Video Recovery 1.19_19 APK
ဖုန်းမှာဖျက်လိုက်မိသောVideos နဲ့ Mp4 တွေကိုပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Video Recovery 1.19_19 APK Reviewed by Ko Lin on 11:02:00 AM Rating: 5
ဖုန်းမှာဖျက်လိုက်မိသောVideos နဲ့ Mp4 တွေကိုပြန်ယူပေးနိုင်တဲ့ Video Recovery 1.19_19 APK
Ko Lin 11:02:00 AM Andriod Recovery
Andriod ဖုန်းကိုင်ဆောင်ထားသော သူငယ်ချင်းတွေအတွက် မတော်တဆ မိမိဖုန်းက Videos တွေကို ဖျက်မိသွားသောအခါ ဒီကောင်လေးနှင့် ပြန်လေရှာဖွေက ရနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်ဖြစ်စေ မလိုအပ်သည်ဖြစ်စေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။ လိုအပ်သူများကတော့ အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။အောက်မှာ ရှာဖွေနည်း အနည်းငယ်ပြထားပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေကြလိမ်မယ့်ထင်လို့ပါ/
Due to the popularity and success of my photo recovery app, I have received many requests to develop other forms of media recovery. I listen and respond to every single review, and so this is the BETA test app for the audio recovery. Videos include movies, clips, and camera recorded media.
Disclaimer: Due to the many operation systems, device types, and time of media deletion, this app cannot guarantee the recovery of your media. As with any software, please back up your media before running. The developer is not liable for any result accidental or intentional due to using this app.